Cigna मर्डर संग दूर हुन दिनुहोस् Martech Zone
Cigna मर्डर संग दूर हुन नदिनुहोस्
शनिबार, डिसेम्बर 22, 2007 शनिबार, डिसेम्बर 22, 2007 Douglas Karr
आराममा शान्ति, नतालिन।
यदि तपाईंलाई कहिले पनि बेवास्ता गरिएको छैन, बीमा सम्झौतामा पेच परेको छ, वा जसको बारे सुनेको छ - तपाईं भाग्यशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ! संयुक्त राज्य अमेरिकामा बीमा उद्योग सबैभन्दा लाभदायक मध्ये एक हो। गणित एकदम सरल छ, अधिक मान्छे मर्नु पर्छ - राम्रो मुनाफा।
के हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं? इन्टर्नेट र ब्लगोस्फीयर? के हामी शाब्दिक सन्देशको साथ खोज ईन्जिन बमबारी गर्न सक्छौं? Cigna बेकार छ र फरक पार्नुहोस्? तिनीहरू दाबी गर्छन् कि तिनीहरू केयरिंगको व्यवसायमा छन्। के यो सत्य हो? के हेरचाहमा वास्तवमा हेरचाह नगरी भन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ? म विश्वास गर्छु कि डाक्टरहरूले ख्याल राख्छन्, तर बीमा कम्पनीहरूसँग विपरित प्रोत्साहन हुन्छ।
डिसेम्बर ११ को एक पत्रमा, चार डाक्टरहरूले बिमाकर्तालाई पुनर्विचार गर्न अपील गरे। उनीहरूले भने कि बिरूवा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने रोगीहरूको six महिनाको बाँच्ने दर about 11 प्रतिशत हुन्छ।
सिग्नाले भने कि यो प्रयोगात्मक हो र उनीहरूको नीतिले कभर गरेको छैन।
नाटालिन सार्किसन अब मरेकी छ ल्युकेमियासँग संघर्ष गरेको तीन वर्ष पछि र उनको बीमा कम्पनी, सिग्नाबाट आवश्यक ट्रान्सप्लान्ट अस्वीकृत भयो।
यो मेरो आँखामा पहिलो डिग्री हत्या को कम छ। असुरक्षित काम गर्ने स्थितिको कारणले एक कर्मचारी गुमाउने एक रोजगारदातालाई हत्या वा गलत मृत्युको आरोप लगाउन सकिन्छ, किन एक बीमा कम्पनी सक्दैन? सिग्नाले अवस्थालाई वेवास्ता गरेनन्, तिनीहरूले यसलाई विश्लेषण गरे र बिरामीलाई मर्न छोड्ने सचेत छनौट गरे।
यी कथाहरू दुबै क्रोध र मलाई डराउँदछन्। यदि तपाईंसँग Cigna मा स्टक वा एक म्युचुअल फन्डको स्वामित्व छ जुन मिक्समा Cigna छ, म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु कि यस्तो कम्पनीलाई समर्थन नगर्नुहोस्। यो समय हो कि बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूको ज्यान लिने धेरै व्यक्तिको रगतको साथ आफ्नो जेबको अस्तर छोड्छ।
नतालिनको स struggle्घर्षमा अधिक:
नाटालिन बित्दछ, Cigna मा लाज
सिग्नाले नतालिनलाई मार्छ
नतालिन मरेको छ
CIGNA कार्यकारी प्रबन्धन टीम - तपाईं कसरी राती सुत्नुहुन्छ ?!
एच। एडवर्ड हान्वे, अध्यक्ष र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CIGNA निगम
माइकल डब्ल्यू बेल, कार्यकारी उपाध्यक्ष र मुख्य वित्तीय अधिकारी, CIGNA निगम
डेभिड एम। Cordani, राष्ट्रपति, CIGNA हेल्थकेयर
पल ई। हार्टले, राष्ट्रपति, CIGNA अन्तर्राष्ट्रिय
जोन एम। मुराबिटो, कार्यकारी उपाध्यक्ष, मानव संसाधन र सेवाहरू, CIGNA निगम
क्यारोल एन पेट्रेन, कार्यकारी उपाध्यक्ष र जनरल परामर्शदाता, CIGNA निगम
करेन एस रोहन, अध्यक्ष, CIGNA समूह बीमा र अध्यक्ष, CIGNA दन्त र दृष्टि देखभाल
माइकल डी वोलर, कार्यकारी उपाध्यक्ष र मुख्य सूचना अधिकारी, CIGNA निगम
टैग: लेखकडेटा दृष्टिकरणग्लोबल मार्केटिंगजसचा काकास-वुल्फMindjetसंगठन
केहि परामर्श हास्य… चम्चा र स्ट्रिंग
बिग स्विच र ब्लुलोक
22 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 12:00 बजे
डग: मैले हिजो मात्र "Sicko" हेरेँ। डरलाग्दो।
22 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 2:03 बजे
मेरो लागि डरलाग्दो पक्ष भनेको यो हो - यस देशको बीमा कम्पनीसँग दावी अस्वीकार गर्ने अधिकार छ कि डाक्टरले जीवन लम्ब्याउने वा जोगाउने कुरामा जोड दिन्छ।
जीवन वा मृत्यु निर्णय गर्ने व्यवसाय अवैध हुनुपर्छ। सादा र सरल।
22 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 6:21 बजे
हो, यो डरलाग्दो छ, तर यो लामो समयको लागि सत्य भएको छ। सम्पूर्ण घटना केही हदसम्म विडम्बनापूर्ण छ: दाताको अङ्ग उपलब्ध नभएको कारणले केही मानिसहरू मर्नुपर्छ। यहाँ हामीसँग स्पष्ट रूपमा एउटा केस थियो जहाँ त्यहाँ एउटा थियो, र उनले यसलाई प्राप्त गर्न सकेनन्।
वा अझ सम्भव छ, उनी हुन सक्छिन्, तर त्यसपछि उनको परिवारका बाँकी सदस्यहरूले आफ्नै स्रोतहरू जलाएपछि सडकमा पेन्सिलहरू बेच्नुपर्ने हुन सक्छ। जसका कारण उनीहरुले बिमा गरेको सोचे । यो तस्बिरमा पक्कै केहि गलत छ ...
22 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 7:11 बजे
तपाईलाई यहाँ देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो र आशा छ तपाई राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ।
मलाई आशा छ कि हामीले हाम्रो विधायिकालाई बिरामीहरूको हेरचाह छोड्न आवश्यक दबाब लागू गर्न सक्छौं जहाँ यो सम्बन्धित छ - डाक्टरसँग, बीमा कम्पनीसँग होइन।
22 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 6:48 बजे
समस्या यो हो कि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरूको तल्लो रेखा लाभहरू नतिर्नेमा निर्भर छ। मेरो छोराको औषधिको लागि अनुमोदन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दा मैले यो सामना गरेको हो। उहाँसँग Zyrtec-D को लागि अनुमोदन थियो, जुन 2004 मा एक गैर-फॉर्म्युलरी औषधि थियो जब युद्ध सुरु भयो। मैले गरेन। हामी दुबैलाई एडीएचडीको लागि एउटै औषधि सिफारिस गरिएको थियो। मेरो स्वीकृत भयो; उनको थिएन। यो यस वर्ष सम्म स्वीकृत भएन, जब Zyrtec-D OTC बिक्री को लागी स्वीकृत भएको थियो? संयोग ? तपाईं निर्णय गर्नुहोस्।
हाम्रो कथा यसको तुलनामा सानो छ, तर सिद्धान्त अझै पनि राख्छ। उनीहरूले बोन म्यारो प्रत्यारोपण र हेरचाह पछि कभर गरेका थिए त्यसैले उनीहरूको दिमागमा, उनीहरूले यस केटीको लागि कुनै पनि थप महँगो उपचार अनुमोदन गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेका थिए। मलाई शंका छ कि अनुरोध सुरुमा कसैलाई थाहा छ (उदाहरणका लागि ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टले मनोचिकित्सक औषधिहरू अनुमोदन गर्ने बारे मेरो नोटहरू हेर्नुहोस्), त्यसैले यो होइन भन्न अपेक्षाकृत सरल थियो। चारजना चिकित्सकले अपिल गरे पनि अस्वीकार गरेका थिए ।
माइकल मूरसँग यो धेरै अधिकार छ: चिकित्सा निर्णयहरू बिरामीको डाक्टर बाहेक अरू कसैको हातमा राख्नु गलत हो। र सिग्नाका तथाकथित 'डाक्टरहरू' को लागि मैले केवल सोध्नु पर्छ कि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको अस्वीकारहरूसँग उनीहरूको हिप्पोक्रेटिक शपथ कसरी मिलाउँछन्।
22 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 7:18 बजे
अनुसार फोर्ब्स, एच एडवर्ड हानवेको कुल क्षतिपूर्ति $ 28.82 मिलियन छ र उनको5वर्षको $ 78.31 मिलियन छ। हानवे सिग्ना (CI) को6वर्षदेखि सीईओ र 28 वर्षदेखि कम्पनीमा छन्।
यसरी नै उसले मिलाउँछ ।
25 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 2:21 बजे
दुर्भाग्यवश हामीमध्ये धेरैजसो अमेरिकीहरू मोटो, गूंगा र खुसी जीवन बिताउँछन्। हामी यस्ता त्रासदीहरूको बारेमा पढ्छौं र सोच्दछौं कि यो म वा मेरो परिवारलाई हुनेछैन। हामी "उनी क्र्याकबाट खसे" वा "उनी जसरी पनि मर्ने थियो" जस्ता विचारहरूले यसको महत्त्वलाई कम गर्ने प्रयास गर्छौं। हाम्रो प्रेसले बीमा कम्पनीहरूको नकारात्मक र आपराधिक गतिविधिको बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न र रिपोर्ट गर्न असफल भएको छ किनभने धेरै बीमाकर्ताहरूले प्रायोजकहरू पनि तिरिरहेका छन्। हामीसँग जोन स्टोसेल जस्ता रिपोर्टरहरू छन् जसमा माइकल मूर्सको फिल्म सिकोलाई नेटालिन्सको मृत्यु हुनुभन्दा केही महिना अगाडि नै विलफाइ गर्दैछ।
जबसम्म हामी सबै पर्याप्त रूपमा आक्रोशित हुँदैनौं र वास्तवमा कल गर्दैनौं, चिठीहरू लेख्दैनौं र हाम्रो आक्रोश प्रकट गर्दैनौं, यी अभ्यासहरू जारी रहनेछन्। यसलाई आफ्नो कलम, आफ्नो मुख र आफ्नो पकेट बुक संग भन्नुहोस्।
आफ्नो कांग्रेस सदस्यलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। असत्य समाचार पत्रकारहरूलाई इमेल गर्नुहोस्। सम्पर्क गर्नुहोस् र यी समाचार कार्यक्रमहरूमा विज्ञापन गर्ने निगमहरूलाई बहिष्कार गर्ने धम्की दिनुहोस्।
डिसे 26, 2007 मा 9: 10 AM
यो सबै कुराले मेरो लागि थप प्रश्नहरू खडा गर्छ र जवाफ दिन्छ।
मैले पढेको कुराबाट, यदि उनले प्रत्यारोपण गराइन् भने उनी अझै छ महिना बाँच्न सक्छिन्। उनी पक्कै पनि त्यो भन्दा धेरै बाँच्ने थिएनन्। उहाँलाई टर्मिनल रोग थियो।
म परिवारको लागि महसुस गर्छु। तर यो कट र सुख्खा छैन जस्तो कि केहि मिडिया रिपोर्टहरूले यसलाई बनाउन चाहन्छन्। यदि यो उनको यो उपचार र 20 वर्षसम्म बाँच्ने कुरा हो भने ... यो कुनै दिमागी कुरा होइन। तर यो प्रत्यारोपण गर्नाले उनलाई केही एन्टि-रिजेक्शन औषधि लिनु पर्ने थियो… जसले उनको पहिलेदेखि नै कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली लिने थियो र यसलाई अझ खराब बनाइदिने थियो… जसले गर्दा क्यान्सर अझ छिटो फैलिन्थ्यो। र क्यान्सर पहिलो स्थानमा टर्मिनल थियो।
र म अहिले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु संग मेरो आफ्नै लडाई मार्फत जाँदैछु। त्यसैले मलाई थाहा छ कि तिनीहरू सही अव्यावहारिक हुन सक्छन्। र मेरो दाबी केवल दुई सय डलर हो ... यो दाबी वरिपरि घुमिरहेको छ अंकको नजिक कतै छैन।
डिसे 26, 2007 मा 9: 34 AM
म पक्का छु कि त्यहाँ धेरै टुक्राहरू हराइरहेका छन्, तर मेरो लागि तल्लो रेखा यो थियो कि केही डाक्टर र नर्सहरूले उपचारको लागि अनुरोध गरे र उनीहरूलाई बीमा कम्पनीद्वारा भिटो गरियो। त्यो कहिल्यै नहोस् भनेर हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
तपाईको युद्धको साथ शुभकामना! म यस देशका धेरै 'बीमा नभएका' मध्ये एक हुँ - मेरो तौल धेरै छ र यो आफैले पाउन सक्दिन। (मेरा बच्चाहरू आफ्नै नीतिमा कभर छन्)।
डिसे 26, 2007 मा 10: 16 AM
म डाक्टरहरूलाई त्यति नै विश्वास गर्छु जति बीमा कम्पनीहरूमा विश्वास गर्छु।
के तपाइँ केहि गर्न को लागी क्षमता को लागी अनुरोध गर्नुहुन्न कि पैसा को डुङ्गा संग आफ्नो जेब लाई लाइन को लागी?
यसैले तपाईंले अस्वीकार गरिएका निर्णयहरूको लागि तेस्रो पक्ष मध्यस्थमा अपील गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एक व्यक्ति जो:
A. परिवारको भावनाबाट प्रभावित छैन।
B. उनीहरूको तल्लो रेखाबाट प्रभावित हुँदैन (बीमा र डाक्टरहरूको लागि जान्छ)
अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ।
यो संयोग होइन कि धेरै डाक्टरहरू आफ्नै अधिकारमा करोडपति छन्।
त्यसोभए विषयबाट बाहिर, के तपाइँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवालाई समर्थन गर्नुहुन्छ?
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 2:12 बजे
मलाई धेरै डाक्टरहरू थाहा पाउँदा खुसी लाग्यो र बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूलाई कसरी प्रभाव पारेको देख्दा दुःख लाग्यो। मेरो एक साथीलाई उसको 'उत्पादकता' सुधार गर्न प्रत्येक बिरामीसँग 'कम समय बिताउन' धकेलियो। मैले उसलाई आफ्नो तलबको 1/3 कुप्रथा बीमा (अर्को लाभदायक उद्योग) मा खर्च गरेको पनि देखें।
बीमाका कागजी कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने कुनै उपाय नभएकोले उसले आफ्नै अभ्यास गर्नुको सट्टा डाक्टरको समूहमा सामेल हुनुपर्ने थियो। यो एक हृदय तोड्ने थियो किनभने उहाँ एक उत्कृष्ट डाक्टर हुनुहुन्थ्यो र उत्पादन लाइन स्वास्थ्य सेवामा टनेल हुन योग्य थिएन।
मलाई लाग्छ कि तपाईले भेट्टाउनुहुनेछ कि धेरै जसो डाक्टरहरू करोडपति छैनन् र अझ धेरैले बिरामीको हेरचाह छोडिरहेका छन् किनभने उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने सबै बकवासका कारण। यो एक गडबड छ।
Re: विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा
म क्यानडामा6वर्षसम्म बसें र म वास्तवमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवालाई समर्थन गर्छु (मेरो रूढीवादी पालनपोषणको डरलाग्दो)। कारण सरल छ - मलाई लाग्छ कि औषधि एक सामाजिक मुद्दा हो, व्यापार होइन ... यद्यपि अमेरिकामा हामीले यसलाई बूमिङ व्यवसाय बनाएका छौं।
क्यानडाका चुनौतीहरू छन्, म स्वीकार गर्नेछु। हामीले यहाँ सुनेका डरलाग्दा कथाहरू थोरै र अगाडीका छन्, यद्यपि।
म विश्वास गर्छु कि त्यहाँ विश्वव्यापी स्वास्थ्य हेरचाहको लागि पनि ठूलो व्यापारिक फाइदा छ - मानिसहरू आफ्नो परिवारको लागि स्वास्थ्य सेवाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन भने आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न डराउँदैनन्। मानिसहरू अब खराब कामहरू छोड्न डराउँदैनन्, या त, सुधारिएको कामको अवस्थाको नेतृत्व गर्दछ।
मलाई साँच्चै लाग्छ कि यो एक कदम माथि छ। आखिर, यदि तपाइँ एक बीमा सीईओ $ 28 मिलियन एक वर्ष तिर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ केहि सुव्यवस्थित गर्ने अवसर छ, हैन?
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 2:17 बजे
होइन। यदि तपाईंले आफ्नो आम्दानीको 33% बढी सरकारलाई बीमाको लागि दिनुभएको देख्नुभयो भने... अगाडि जानुहोस्। तर यो अहिले उभिएको छ... म पूर्ण (धेरै राम्रो) चिकित्सा बीमाको लागि $250/महिना तिर्छु। यद्यपि मेरो रोजगारदाताले धेरै धेरै तिर्छन्। तर त्यो विकासकर्ताहरूलाई रोजगारीको अंश हो।
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 2:28 बजे
विडम्बना यो हो कि हामी पहिले नै त्यो भुक्तान गर्छौं, यद्यपि, ck। जब एक असुरक्षित व्यक्तिको उपचार हुन्छ, तपाईले यसको लागि करहरू र बढ्दो चिकित्सा दरहरू, आदि मार्फत तिर्नुहुन्छ। हामीले पहिले नै विश्वव्यापी स्वास्थ्य हेरचाहको लागि भुक्तान गरिरहेका छौं... तर यो उपचारको लागि मात्र हो - रोकथाम औषधि होइन।
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 4:24 बजे
तपाईंको टिप्पणीको सन्दर्भमा कि नेटलिनले प्रत्यारोपणको साथ छ महिना हुन्थ्यो - गलत। प्रत्यारोपण नगरी, उनीहरूले उनलाई छ महिना बाहिर दिए। बोन म्यारो प्रत्यारोपणले ल्युकेमिया उन्मूलन गर्न सफल भएको थियो तर लागत कलेजोको क्षति थियो जुन अपूरणीय थियो। यदि उनले प्रत्यारोपण पाएको भए, उनको पूर्ण जीवनको सम्भावना थियो। यो बिना, उनी बर्बाद भइन्।
डाक्टरमा डाक्टर बन्ने क्षमता नहुँदा प्रणाली पूर्णरुपमा भत्किएको छ । यदि तपाइँ उनीहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, यो सम्भवतः किनभने उनीहरूले रक्षात्मक औषधि अभ्यास गर्नुपर्‍यो जहाँ उनीहरूले बीमाकर्ता, बिरामीलाई सन्तुष्ट पार्छन् र बीमा दायित्व जोखिमहरू पनि एक लाइनमा हिंड्छन्।
प्रणाली फिक्स गर्नुको अर्थ कदाचार क्षति पुरस्कार र दायित्व मुद्दाहरूको लागि आधारहरू सीमित गर्ने, बीमाकर्ताहरूको नाफा सीमित गर्ने र डाक्टरको रूपमा आफ्नो शिक्षाको लागि $ 100K भन्दा बढी तिर्ने मानिसहरूको हातमा औषधिको अभ्यास फिर्ता राख्नु हो। तपाईले साँच्चै फरक परिप्रेक्ष्यको लागि डाक्टर, पैसा र औषधिमा डा. किर्सेनबमको श्रृंखला पढ्नुपर्छ। यहाँ सुरू गर्नुहोस्.
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 4:58 बजे
मैले पढेको सबै कुराले कलेजो प्रत्यारोपणको लक्ष्यलाई अर्को छ महिना बाँच्ने सम्भावना 65% थियो।
अब मेरो प्रारम्भिक पोष्टले भनेजस्तै, यदि यसले अर्को 20 वर्षको लागि जीवन सम्भव बनाउँदछ ... सबै यसको लागि। तर यदि यसको छ महिना ... म कुनै पनि निर्णयको लागि माथि र तल उफ्रने छैन। र तेस्रो पक्ष मध्यस्थ एक मान्य समाधान हो भन्ने लाग्छ।
र जब तिनीहरूको मुद्दाहरू छन्, मलाई लाग्दैन कि समाधान सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा हो, जसले हाम्रो सरकारलाई बोझ सार्छ र तिनीहरू चूस्छन्।
समाधान हो, तपाईले संकेत गरे जस्तै ... कदाचार क्षति र अन्य नियमहरू सीमित गर्दै। तर म पक्कै पनि हिलारी क्लिन्टनको जस्तै स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापनमा राख्ने छैन। साँच्चै भन्ने हो भने, मेरो करको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने बारे पर्याप्त समस्याहरू छन्... नाकको काम जस्ता 'स्वास्थ्य समस्याहरू' को लागि भुक्तान गर्न आवश्यक छैन।
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 8:07 बजे
मा एक एसोसिएटेड प्रेस लेख प्रति http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1, UCLA मा डाक्टरहरू यसो भन्दै उद्धृत गरिएको छ "... Nataline's जस्तै परिस्थितिहरूमा प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीहरूको छ महिना बाँच्ने दर लगभग 65 प्रतिशत छ।"
मैले के बुझेको छु यसको मतलब यो हो कि उनीसँग पहिलो 65 महिना बाँच्ने सम्भावना6प्रतिशत हुनेछ, र तपाईंले उल्लेख गरेझैं, उनी6महिनामा मर्नेछन्। ल्युकेमियाको उपचारका कारण उनको कलेजो फेल भएको हुनाले उनलाई टर्मिनल रोग थियो। मेरो बुझाइ छ कि यदि उसले यसलाई6महिना बनायो भने, उसले यसलाई धेरै वर्ष लामो बनाउने हरेक मौका पाउने थियो।
यो इमानदारीपूर्वक मलाई तपाइँको पोस्टहरु बाट देखिन्छ कि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि केहि राम्रो गर्न सक्ने स्वास्थ्य हेरविचार केवल यो किन्न सक्नेहरु को लागी उपलब्ध हुनुपर्दछ, र अरु सबै मरेको भन्दा राम्रो छ। म तपाईंका धेरै बुँदा र सुझावहरूसँग सहमत छु; मलाई लाग्छ कि तेस्रो पक्ष मध्यस्थता एक राम्रो विचार हो, विशेष गरी यदि यो छिटो छ, तर "उनलाई मर्न पनि सक्छ, ऊ जे भए पनि जाँदैछ" भन्ने तपाईंको कथित धारणा बरु अर्थपूर्ण रूपमा आउँछ। यसले तपाईंलाई आफूमा मात्र चासो राख्छ र अरू कसैलाई होइन भन्ने धारणा दिन्छ।
26 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 8:18 बजे
म सबैजना बाँच्न चाहन्छु र स्वास्थ्य बीमामा पहुँच गर्न चाहन्छु, तर मलाई यो सरकारले उपलब्ध गराउने ठाउँ हो जस्तो लाग्दैन।
म बरु धेरै कम सरकार (जस्तै, माइनस आईआरएस) हेर्न चाहन्छु, यो भन्दा बढी होइन।
तपाईलाई हाम्रा संस्थापक पिताहरूले यो कसरी गर्नुभयो जस्तो लाग्छ? यसको जवाफ भनेको डाक्टरहरूमाथिको बोझ कम गर्नु हो (अर्थात् कानुनी मुद्दाहरू) र त्यो बोझ प्रत्येक कर तिर्नेलाई नदिनु हो। हाम्रो सरकारले आफैलाई अयोग्य साबित गरेको छ र हाम्रो चिकित्सा जीवनमा पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। तिनीहरूको चार्जमा, यस्ता केसहरू कम सामान्य होइन, धेरै सामान्य हुनेछन्। केवल हृदयघातको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् र क्यान्सर भएकाहरूको क्यान्सर बचेको दर। निजी औषधि धेरै प्रभावकारी छ।
तर हातमा भएको मामलाको रूपमा, मलाई यो फेरि भन्न दिनुहोस् .. यदि प्रत्यारोपण पछि रोगको निदान लामो जीवनको सम्भावनाको लागि थियो ... तब म यसको लागि सबै छु। तर तपाईंले नकारात्मक रूपमा औंल्याउनुभएको कथन मैले पढें।
वास्तवमै राम्रोसँग लेखिएको, तथ्याङ्क शैलीको लेख हेर्न चाहन्छु।
यो एक सजिलो विषय होइन र भावनात्मक तर्क संग एक छेड्नु हुँदैन। तथ्य मात्र हो म्याम।
जनवरी 10, 2008 मा 1: 35 एएम
तथ्यहरू सरल छन्, सिग्ना रोग निको पार्न खर्च गर्न चाहँदैनन्, उही सिग्ना ग्लेन्डेलले यो परिवारलाई यो गर्‍यो, उनीहरूले सक्दो प्रयास गरे, केवल सरकारी एजेन्सीहरूले यी व्यक्तिहरूलाई उपभोक्तालाई दुर्व्यवहार गर्न दिएनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन। गरिन्छ। यसलाई ढाकिएको छ।
भ्यालेन्सिया, क्यालिफोर्नियाका कांग्रेसी लेख्छन्
कांग्रेसले लेखे: मे 30th 1996 को एक पत्रमा निगमहरूको विभागलाई। जो जोशुआ गोडफ्रेलाई प्रदान गरिएको पत्रको प्रतिलिपि।
प्रिय आयुक्त विशप,
म क्यालिफोर्निया इजाजतपत्र प्राप्त HMO, CIGNA हेल्थ केयरको साथ गम्भीर कठिनाइहरू अनुभव गर्ने मेरा निर्वाचन क्षेत्र जोसेफिन जोशुआ गोडफ्रेको तर्फबाट लेख्दैछु।
श्रीमती गोडफ्रेले सन् १९९३ को मार्चदेखि अगस्ट १९९४ सम्म CIGNA ले आफ्नो फोक्सोको क्यान्सरको उचित निदान र उपचार गर्न असफल भएको बताए। एक वर्षपछि गैर सिग्ना डाक्टरहरूले उनको बायाँ फोक्सोमा रहेको कार्सिनोइड ट्युमर सजिलै पहिचान गरे र श्रीमती गोडफ्रेलाई भने कि ट्युमर १९९३ को शुरुमा नै पत्ता लागेको थियो। CIGNA बाट ट्यूमरको अस्तित्वको बारम्बार इन्कारको बावजुद, ट्युमर अन्ततः ST मा हटाइयो। Burbank क्यालिफोर्निया मा जोसेफ अस्पताल। पोस्ट अपरेटिभ प्याथोलोजीले ट्युमर "पूर्ण रूपमा बढेको… पूर्ण रूपमा परिपक्व भएको रिपोर्ट गर्दछ।
GIGNA द्वारा जाँच गर्दा श्रीमती गोडफ्रेले बारम्बार चिकित्सा उपचारको लागि विशेषज्ञलाई रेफर गर्न भनिन्। केही अस्पष्ट कारणका लागि GIGNA ले उपयुक्त चिकित्सा उपचारको लागि विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न अस्वीकार गर्यो। CIGNA ले श्रीमती गोडफ्रेको मेडिकल रेकर्डहरू जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ताकि अर्को चिकित्सकले उनको चिकित्सा इतिहासको समीक्षा गर्न सकून् र उपचार गर्न सकून्। दर्जनौं अनुरोध पछि मात्र रेकर्डहरू जारी गरियो। यद्यपि, श्रीमती गोडफ्रेले CIGNA लाई दुर्व्यवहारबाट जोगाउनका लागि कागजातहरू दुर्भावनापूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिएको विश्वास गर्छिन्।
क्यालिफोर्निया राज्यको HMOS मा नामांकन गरिएका उपभोक्ताहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ। राज्यले उपभोक्ताहरूलाई HMOS बारे शिक्षित र जानकारी दिन आवश्यक छ। HMOS मा 12 मिलियन क्यालिफोर्नियालीहरूसँग गुणस्तर र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको बारेमा उपभोक्ताहरूलाई शिक्षा र जानकारी गराउनु महत्त्वपूर्ण उपक्रम हो। दुर्भाग्यवश, यदि श्रीमती Godfreys अनुभव HMOS द्वारा उपभोक्ताहरूको चिकित्सा आवश्यकताहरू कसरी व्यवहार गरिँदैछ भन्ने कुनै संकेत हो भने, हामीले व्यवस्थित हेरचाह प्रणालीलाई पुन: जाँच गर्नुपर्छ। कांग्रेसले HMOS र उनीहरूले प्रदान गर्ने चिकित्सा उपचारको गुणस्तर जाँच गर्न थालेको छ। धेरै बिरामीहरू विश्वास गर्छन् कि HMOS ले लागत घटाउन बिरामीहरूलाई नियमित रूपमा हेरचाह र जानकारी अस्वीकार गर्दछ। चिकित्सकहरूलाई HMO द्वारा ओभरड नगरिएको उपचारको सुझाव दिनबाट निषेध गर्ने स्पष्ट "ग्याग नियम" पनि विशेष चिन्ताको विषय हो।
मेरो निर्वाचनकर्ता मात्र व्यक्ति होइन जसलाई HMO सँग व्यवहार गर्न कठिनाइ भएको छ।
(१) स्यान डिएगोको रुथ म्यासिनेसको मृत्यु भयो जब एचएमओ चिकित्सकहरूले हृदय रोगको निदान र उपचार गर्न र कार्डियोजेनिक आघात आकस्मिक प्रतिक्रियाहरूको लागि चिकित्सा परीक्षणहरू प्रदान गर्न असफल भए; (1) विल स्पेन्स अफ लस एन्जलस आफ्नो जीवनको लागि लड्ने कारण गैर-हजकिन्स लिम्फोमा क्यान्सर गलत थियो। - एक वर्ष भन्दा बढीको लागि निदान। मलाई भनिएको छ कि यी व्यक्तिहरू जस्तै अन्य हजारौं देशभरि यस्तै कथाहरू छन्।
म सम्मानपूर्वक छु कि तपाईंको कार्यालयले यी दावीहरूको जाँच गर्दछ, र राज्यको HMOS लाई उचित रूपमा निगरानी गरिरहेको छ कि छैन र उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक जानकारी दिइएको छ कि छैन भनेर छानबिन गर्दछ। मलाई विश्वास छ कि श्रीमती गोडफ्रेलाई उनको हेरचाह गर्ने प्रणालीले घोर दुर्व्यवहार गरेको छ। यदि उल्लङ्घनहरू पर्दाफास भएमा म अनुरोध गर्दछु कि उपभोक्ताहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न जिम्मेवार संस्थाहरू विरुद्ध प्रवर्तन कारबाही गरियोस्। एक व्यापक अनुसन्धानले 12 मिलियन भन्दा बढी HMO उपभोक्ताहरूलाई राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। कृपया मेरो जिल्ला निर्देशक, अर्मान्डो ई. अरालोजालाई छिटो भन्दा छिटो जवाफ दिनुहोस्।
निगम उत्तर विभाग
लस एन्जलस, CA जवाफ »
जो जोशुआ गडफ्रेले क्यालिफोर्निया र यो राष्ट्रका मानिसहरूसँग साझा गर्नुभयो:
2 जुलाई, 1996 मा कांग्रेसको पत्रलाई निगम विभागको प्रतिक्रिया
RE: फाइल नम्बर अल्फा
म तपाईंको मे 30, 1996 को पत्र प्राप्त गर्दै छु, जुन 4, 1996 मा माथिका नाम भएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको स्वास्थ्य सेवा योजना, क्यालिफोर्नियाको सिग्ना हेल्थकेयरको सम्बन्धमा प्राप्त भयो।
निगमहरू विभाग (? विभाग?) ले सिग्ना हेल्थकेयर र अन्य स्वास्थ्य सेवा योजनाहरूलाई नक्स-कीने हेल्थ केयर सेवा योजना ऐन (स्वास्थ्य र सुरक्षा कोड 1340 et seq.) र आयुक्तको नियमहरू (CCR धारा 1300.40 et seq) अन्तर्गत नियमन गर्दछ। ।) विभागले हामीले प्राप्त गरेको सहायता (?RFA?) को प्रत्येक अनुरोधलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ। विभागले प्राप्त गरेको RFA हरू व्यक्तिगत मुद्दा(हरू) को सन्दर्भमा मात्र होइन, तर सम्भावित प्रणालीगत समस्याहरू तर्फ पनि नजर राखेर समीक्षा गरिन्छ। RFA समीक्षा विभागको समग्र नियामक प्रयासहरूको एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो।
विभागले Godfrey परिवार द्वारा पेश गरिएका सबै RFA हरूको समीक्षा गरेको छ वा समीक्षा गरिरहेको छ। जोसेफिन गोडफ्रेको मामला विभागको प्रवर्तन डिभिजन द्वारा समीक्षा गरिएको थियो। यस समीक्षामा सान्दर्भिक मेडिकल रेकर्डहरूको परीक्षण, योजना कर्मचारीहरूसँगको अन्तर्वार्ता, र गोडफ्रे परिवारसँग व्यापक छलफल समावेश थियो तर यसमा मात्र सीमित थिएन। यस समीक्षाको नतिजाको रूपमा, प्रवर्तन डिभिजनले निर्धारण गर्‍यो कि सिग्नाले सन्तोषजनक रूपमा श्रीमती गोडफ्रेका विशेष गुनासोहरूलाई सम्बोधन गरेको थियो र यी समस्याहरूको समाधानका लागि रणनीतिहरू विकास गरेको थियो।
क्रिस्टोफर Godfrey?s RFA को रूपमा, Cigna श्री र श्रीमती गोडफ्रे दुवैलाई उनीहरूको हालको हेरचाहको समन्वयमा मद्दत गर्न र उनीहरूले सामना गर्न सक्ने कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्न उपलब्ध गराउन (व्यक्तिगत नाम छोडिएको) RN उपलब्ध गराउन सहमत भयो। यी दुवै RFA अहिले बन्द छन्। जे होस्, यी र सबै RFA हरूमा रहेको जानकारी Knox-Kene Act सँग स्वास्थ्य योजनाको अनुपालन सुनिश्चित गर्न विभागको चलिरहेको नियमनमा समावेश गरिएको छ।
विभागले तथाकथित गैगको बारेमा तपाइँको चिन्ता साझा गर्दछ? प्रदायक अनुबंध मा खण्डहरू। विभागले भर्खरै आफ्नो प्रदायक अनुबंधमा एउटा खण्ड मेटाउने योजनाको आवश्यकता थियो जसले प्रदायकलाई योजनालाई राम्रो प्रकाशमा राख्न बाध्य पारेको थियो। सबै इजाजतपत्रदाताहरूलाई भर्खरैको सञ्चारमा, विभागले भन्यो:? प्रत्येक अनुबंध गर्ने चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य सेवा व्यवसायीहरूले बिरामीको स्वास्थ्य र विश्वासको परम्परागत सम्बन्धलाई बढावा दिन इच्छालाई असर गर्न सक्ने कुराहरूको बारेमा इमानदारीपूर्वक सही रूपमा बोल्न सक्षम हुनुपर्दछ। बिरामी र स्वास्थ्य सेवा पेशेवर बीचको विश्वास।?
अन्तमा, म स्वास्थ्य सेवा योजनाहरूमा भर्ना भएका लाखौं क्यालिफोर्नियालीहरूप्रति विभागको प्रतिबद्धतालाई फेरि जोड दिन चाहन्छु। यदि तपाइँसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया विशेष सहायकलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् (नाम छोड्नुहोस्) भवदीय,
किथ पल बिशप
जनवरी 10, 2008 मा 1: 42 एएम
मैले यो कथा विधायकहरूलाई लेखेको थिएँ जब म 14 वर्षको थिएँ, र म तपाईंलाई यो साझा गर्न चाहन्छु।
म १४ वर्षको हुँ र म मेडिकल दुर्व्यवहारको सिकार छु। म कांग्रेस र सिनेटलाई पत्र लेख्दै छु किनकि तपाईंले मेडिकल दुर्व्यवहारका पीडितहरूलाई मद्दत गर्न आवश्यक छ। म बिरामी थिएँ, मेरो टाउको दुख्यो र मेरी आमाले मलाई डाक्टरकहाँ लैजानुभयो। मलाई बारम्बार नाक रगत बग्ने र टाउको दुख्ने समस्या थियो। मलाई लाग्छ कि यो 14 को अन्त्यमा वा 1992 को सुरुमा सुरु भयो। तिनीहरूले म ठीक छु भन्नुभयो, र मलाई याद छ कि एक डाक्टरले मेरी आमा र मेरो लागि धेरै खराब थिए; उनी यसको बारेमा कुरा गर्न पनि चाहँदैनन्। उनले भनिन् कि यो सबै मेरो दिमागमा छ, म ठीक छु। 1993 र 1993 मेरो जीवनमा राम्रो वर्ष थिएनन्। म दुखी थिएँ। मेरी आमा सधैं बिरामी हुनुहुन्थ्यो, सधैं ओछ्यानमा खोकी लाग्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि औषधि लिन CIGNA जानुहुन्थ्यो, सधैं थकित हुनुहुन्थ्यो। मेरी आमा अब उस्तै आमा रहेनन्; मेरो टाउकोमा चोट लागेको थियो, र म मेरी आमालाई कत्तिको बिरामी थिइन भनेर देख्न सक्दिनँ। उनी सधैं निराश, सधैं रोइरहे, र सधैं मूड र खोकी। म उसलाई राती चुप लागेर चिच्याउँथें र उसले हामी सबैलाई जागिरहेकी थिई, अब मलाई नराम्रो लाग्छ।
फेब्रुअरी 1994 मा, म डिप्रेसनमा थिएँ, मेरो टाउको दुखिरहेको थियो, र मैले औषधि क्याबिनेटबाट चक्कीहरू लिएँ, यो मैले यो पहिलो पटक गरेको होइन, तर मेरी आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले ध्यान दिनुभएन। प्रत्येक चोटि मैले धेरै लिनुभयो र एक दिन मेरी आमा मलाई उठाउन आउनुभयो र म उठ्दिनथें, म धेरै थाकेको थिएँ। मेरी आमाले भन्नुभयो, यो हो, लुगा लगाऊ; हामी तुरुन्तै CIGNA जाँदैछौं। म त्यहाँ गएँ र CIGNA डाक्टरहरूले मलाई देखे। तिनीहरूले मलाई मानसिक स्वास्थ्य स्थानमा पठाए र यी दुई ठाउँहरूमध्ये कुनैलाई पनि थाहा थिएन कि मैले के गरें। मेरी आमाले मलाई हिंड्नु भयो र मैले उसलाई मैले विज्ञापन गरेको कुरा बताए। त्यो दिन पछि उनले भनिन् म मरे भने कसरी बाँच्न सक्छु । मेरी आमा रोइन् किनभने उनी धेरै थाकेकी थिइन् उनले आफैलाई दोष दिए किनभने उनी पर्याप्त गरिरहेकी थिइनन्। मैले मेरी आमालाई फेरि यस्तो नगर्ने वाचा गरें। मेरी आमाले CIGNA लाई फोन गर्नुभयो र उनीहरू कस्तो प्रकारका डाक्टरहरू थिए भनेर सोध्दै मैले आफूलाई मार्ने प्रयास गरेको देख्न नसकेपछि रिसाउनु भयो। मेरी आमा धेरै चिच्याउनुभयो उहाँहरूले मलाई पूर्ण शारीरिक दिन राजी गर्नुभयो। मार्चको सुरुमा शारीरिक रूपमा, हामीले मेरो टाउकोको बारेमा धेरै गुनासो गर्‍यौं तिनीहरू मेरो टाउको स्क्यान गर्न सहमत भए। यो करिब साढे दुई महिनासम्म चल्यो, एकपछि अर्को स्क्यान भयो, र अन्तमा डाक्टरले मलाई मेरो साइनस सफा गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो, त्यो मेको अन्त्यमा थियो। मेरी आमाले सोध्नुभयो कि यो अत्यावश्यक थियो, के यो तुरुन्तै गर्नु आवश्यक थियो, डाक्टरले जवाफ दिनुभयो यो जरुरी छैन। मेरी आमाले गर्मीको बिदामा यो गरौंला भन्नुभयो।
मे देखि अगस्ट सम्म, मेरी आमा धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उनी डाक्टरकहाँ गइन् र उनीहरूले उनलाई ६ हप्तासम्म अशक्ततामा राखे । जुलाईको मध्यमा, मैले मेरो आमालाई फोक्सोको क्यान्सर भएको र उहाँ मर्न लाग्नु भएको सपना देखे। मैले यो कुरा सुन्दा मेरी आमा निकै रिसाउनु भयो । अगस्टको सुरुमा, मेरी आमाले मलाई मेरो हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न एक महिनाको लागि आयरल्याण्ड पठाउनुभयो। जब म अगस्टको अन्त्यमा आयरल्यान्डबाट फर्किएँ, हाम्रो घरमा कोलाहल थियो, २ हप्ताको लागि CIGNA ले मेरी आमालाई आफ्नो सबै एक्स-रेहरू हराएको भन्दै उहाँलाई दिन अस्वीकार गरेको थियो। उनले भर्खरै तिनीहरूलाई पाएकी थिइन् र यसले उनलाई लगभग6वर्षदेखि फोक्सोको क्यान्सर भएको देखाएको थियो। मेरी आमाको शल्यक्रिया भयो र उनको फोक्सोको २०% हटाइयो। उनलाई कार्सिनोइड ट्युमर थियो । जब मेरी आमा अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, शल्यचिकित्सकले मेरो सौतेनी बुबालाई भने कि उहाँ पनि ठीक छैन। यो समाप्त भयो कि CIGNA ले मेरो सौतेनी बुबाको रेकर्ड2हप्ताको लागि जारी गर्न अस्वीकार गर्यो। जब तिनीहरू बाहिरका डाक्टरकहाँ गए, CIGNA ले उनको दमको उपचार गरिरहेको थियो; उहाँसँग साँच्चै COPD को धेरै उन्नत केस छ र उहाँको बायाँ फोक्सोमा मेरो आमा जस्तै केहि थियो।
हामी गयौं र हाम्रो सबै परिवारको लागि रेकर्ड लियौं। जब हामीले मेरो देख्यौं, र हामी बाहिरका डाक्टरकहाँ गयौं, बाहिरका डाक्टरहरू गएपछि मलाई थाहा छ कि एक वास्तविक डाक्टर र सिग्ना डाक्टरमा के फरक छ, र म आशा गर्छु कि एक दिन म तपाईंलाई यसको बारेमा सबै बताउन सक्छु। । मलाई हड्डी नष्ट भएको ठाउँमा समस्या थियो, जहाँ हड्डी कक्षामा धकेल्दै थियो, र डाक्टरले मेरो आँखा बाहिर धकेलिएको थियो भने। मेरो शल्यक्रिया Cedar-Sinai मा भएको थियो। 1995 1993 भन्दा धेरै राम्रो छैन किनकि CIGNA ले हामीलाई गरेको यी सबै चीजहरूको लागि कुनै न्याय छैन जस्तो देखिन्छ। हामी कानून परिमार्जन गर्न चाहन्छौं ताकि कसैले पनि यस्तो दुःख भोग्नु नपरोस्। CIGNA आजसम्म हाम्रो परिवारलाई दुर्व्यवहार गर्छ। तिनीहरूले मेरी आमालाई घण्टौंसम्म रुवाउछन् र मलाई आशा छ कि तपाईंले मलाई यस बारे सबै बताउनुहुनेछ। सिग्नाले यो पनि थाहा पाउनुपर्छ कि मेरो आमाबुवा मर्नुभयो भने म कहाँ जान्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीको के हुन्छ ? म एक अमेरिकी हुँ, र जब म हुर्किन्छु, म यहाँ बस्न चाहन्न। म त्यहाँ जान चाहन्छु जहाँ मानिसहरू असल र दयालु छन्। म आयरल्याण्ड जान्छु।
अहिले म २७ वर्षको भएँ । यद्यपि यो धेरै दुखको कुरा हो कि कुनै पनि परिवारले यसरी दुःख भोग्नुपरेको थियो, र यी बदमाश र ठगहरू क्यालिफोर्निया राज्यमा सजायबाट भागे।
सिग्ना ग्लेन्डेललाई धन्यवाद
मार्स 11, 2008 मा 2: 58 एएम
गवाही सिनेट नियमहरू कमिटी सुनुवाई राज्य क्यालिफोर्निया सोमबार मे १२, १९९७ दिउँसो २.०३ बजे
म तपाईहरु संग आफ्नो अनुभव साझा गर्न आएको छु। निगमको विभाग यसको नियामक कार्यमा असफल भएको छ, र मेरो परिवारको अनुभवले त्यो चित्रण गर्दछ। र सिग्ना हेल्थकेयरसँगको मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवले कसरी उपभोक्ताहरू दुर्व्यवहार भइरहेको छ, र निगमको विभागले कसरी आँखा चिम्लिरहेको छ भनेर चित्रण गर्नेछ।
सिग्नासँगको मेरो अनुभव मेरो आमाबाबुको दुर्व्यवहारबाट सुरु भयो, र फलस्वरूप उनीहरूले मेरो परिवारका प्रत्येक सदस्य विरुद्ध दुर्व्यवहार गरे। जब म बिरामी थिएँ र चिकित्सकको आवश्यकता पर्‍यो, तिनीहरूले मलाई अपोइन्टमेन्टमा बाहिर पठाउने गर्थे, र म अपमानित हुने थिए किनभने प्राय जसो उनीहरूले मलाई पठाउने चिकित्सकले मलाई आशा गरेका थिएनन्। नतिजाको रूपमा सिग्नाले मलाई एउटा चिठ्ठी पठायो कि म मेरो आफ्नै चिकित्सक छनोट गर्न सक्छु र उनीहरूले चिकित्सा हेरचाहको लागि तिर्नेछन्। तिनीहरूले एक पटक यो गरे र त्यसपछि तिनीहरूले चिकित्सा हेरचाहको लागि भुक्तान गरेनन्, र मलाई सङ्कलन एजेन्सीहरूले धम्की दिए कि मैले बिल नतिरेको खण्डमा मलाई मुद्दा हाल्नेछु। सिग्नाले यो पनि भनिन् कि म मेरो निवास सान्ता बारबरामा मेरो रोजाइको डाक्टर छनोट गर्न सक्छु, र यो कहिल्यै भएन। सिग्नाले मलाई सान्ता बार्बरामा एक डोस्टर नियुक्त गरे तर जब म बिरामी थिएँ र भेटघाट गर्न चाहन्थें र मैले डाक्टरलाई फोन गरें उनले मेरो कलहरू फिर्ता गरेनन्। हामीले डाक्टरको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सिग्नासँग काम नगर्ने बताए, किनभने सिग्नाले विशेषज्ञहरूको आवश्यकता पर्दा रेफरल गर्दैन।
गत वर्ष मलाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता थियो, र प्रक्रियाको क्रममा डाक्टरले मलाई बायोप्सी चाहिन्छ भन्नुभयो। उसले बिचमा रोकेर जारी राख्न CIGNA बाट प्राधिकरण प्राप्त गर्नुपर्‍यो। डाक्टरले भने कि दुई प्रक्रियाहरू जोडिएका थिए र उनले यसअघि कहिल्यै यसरी औषधि गर्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। यस प्रक्रियापछि मैले निगम विभागमा यसबारे गुनासो गरेपछि सिग्नाले आरोप अस्वीकार गर्दै डाक्टरले गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसबेलादेखि डाक्टर सान्ता बारबराको आफ्नो विधायककहाँ आएर उनले भने कि उनले उनीहरूको प्राधिकरण बिना बायोप्सी गरे, र घटनाको मेरो खाता सही थियो। डाक्टरले मलाई प्रत्येक 90 दिनमा फलोअप गर्नु पर्ने बताउनुभयो किनभने यो क्यान्सर पूर्व अवस्था हो। सिग्नाले भनिन् कि यदि मलाई यो विशेष हेरचाह चाहिन्छ भने मलाई यो आवश्यक छ भनी सुनिश्चित गर्न प्राथमिक हेरचाह डाक्टरमार्फत जानु पर्छ, र तिनीहरूले मलाई सान्ता मारियामा एक प्राथमिक हेरचाह डाक्टर नियुक्त गरे, त्यो काउन्टीमा पनि होइन, र एक घण्टा भन्दा बढी। मेरो निवासबाट।
म एक विद्यार्थी हुँ म UC सान्ता बारबरा जान्छु, र मसँग यातायात छैन। यो एक व्यवहार्य विकल्प मात्र होइन।, र निगम विभागले मलाई सहयोग गर्नुको सट्टा, सिग्नामा मलाई दुव्र्यवहार गर्ने र मेरो उपचारमा अवरोध पुर्‍याउने व्यक्तिले मलाई फेरि फोन गर्यो।
मई 12, 2008 मा 8: 38 PM
भर्खरै धेरै वर्ष युनाइटेड रहेपछि मेरो कम्पनी CIGNA मा गएको छ। भर्खरै मेरो ढाडमा MRI गराउनु परेको थियो र DR.S सचिव CIGNA ले कुनै पनि कुरालाई अधिकार दिन एकदमै नराम्रो छ भनेर बताएको थियो। यसलाई स्वीकृत गर्न5दिन लाग्यो, तर मेरो डाक्टरले शाब्दिक रूपमा भिख माग्नु परेपछि मात्र। मलाई पनि भनियो कि तिनीहरूले प्रक्रियाहरू अनुमोदन गरे तापनि, तिनीहरू कहिलेकाहीं फर्केर अस्वीकार गर्छन् र यो तिनीहरूको विशिष्टतामा आधिकारिक नभएको भन्दै अस्वीकार गर्छन्, र तपाईं बिलमा अड्कनुभयो। मामिलालाई खराब बनाउन मैले प्राप्त गरें। मेरो PCP मा जानुको सट्टा भविष्यमा फोक्सो, मुटु, ढाड, वा हड्डीका समस्याहरूका लागि "उनको नर्स" लाई कल गर्न रुचि छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि CIGNA टोनाइटको कल!! मैले उनीहरूलाई भनेँ कि मलाई फोनमा "हेर्नु" हुन सहज छैन र जे भए पनि धन्यवाद। मैले प्रस्तावमा हाम फालेको नहुँदा उनी धेरै निराश भइन्।
मलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने कुनै पनि भविष्यका चिकित्सा समस्याहरूबाट म पूर्ण रूपमा डराएको छु, विशेष गरी म7वर्षको उमेरमा छु, र टिप्पणीहरू पढेपछि CIGNA एक बेवास्ता गर्ने कम्पनी जस्तो देखिन्छ। म केवल हामी सबै स्वस्थ रहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्छु, किनकि CIGNA पैसाको लागि बाहिर छ। बिरामी!!!! यो केवल 1 हप्तामा मलाई स्पष्ट भयो !!!!!!!!!!!
म मेरो इन्सको रूपमा सिग्नाको साथ प्रमुख एयरलाइन्सका लागि काम गर्छु। काममा, काममा, मेरो ढाड भाँचियो। यो ह्याङ्गर प्रबन्धकले मलाई यो "नोट इन द जॉब इन्जुरी" हो भनी बताउँछन् !!
मैले सिग्ना मार्फत आफ्नो "दीर्घकालीन असक्षमता" गुमाए। ठीक छ, तिनीहरूले - सिग्नाले मलाई शारीरिक थेरापीको यो वेश्यामा पठायो जसले सिग्नालाई उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा बताए। त्यसोभए, म मेरो ढाडमा कुनै सहयोग बिना र कुनै आम्दानी बिना पीडामा सुतिरहेको छु। कसैसँग जवाफ छ र यदि कसैलाई फोन नम्बर चाहिन्छ भने कल गर्न, किनकि म पैसा पास गर्ने मान्छे र मसँग कल गर्न नम्बरहरूको ड्र हुनुपर्छ, ती सबैले मद्दत गरेन तर केटासँग फोन नम्बरहरू छन् !!
समापनमा, लागू हुनेहरूका लागि मेरो गधा चुम्बन गर्नुहोस्, तिनीहरूका लागि जुन यो गर्दैन, म तपाईंको पीडा र जीवन गुमाएकोमा माफी चाहन्छु
मेरी आमाको निधन भएको ११ वर्ष भइसकेको छ र सिग्ना फ्लूको लागि अस्पतालमा हुँदा उनले गरेको बीमा हो। केही समयपछि अस्पतालमा हुँदा उनी झन् खराब हुँदै गइन् तर राम्रो उपचार गर्नुको सट्टा हामीले अस्पतालमा काम गर्ने एउटी महिलालाई भेट्यौं र सिग्नाले पैसा नदिने भएकाले म र मेरी आमालाई घर जानु पर्ने बताए। अब उनको बसाइ। सिग्नाले उनलाई अस्पतालबाट निकाल्दा मेरी आमा मात्र ५५ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा भएन तर मेडिकल रेकर्डका कारण थाहा हुनु पर्ने सिग्नालाई अस्पतालमा कुनै पनि प्रकारको भुक्तानीको लागि पठाउनु परेको थियो कि मेरी आमाको आन्द्रामा आन्द्रा अड्किएको कारण उनको मलाशयबाट रगत बगिरहेको थियो र हुन सकेन। सिग्नाले अब उपचारको लागि पैसा नदिने बताएको बेला उनी आफैं खडा भइन्। मेरी आमा त्यो हप्ता भित्र ER मा फर्किनुहुन्थ्यो यति बिरामी कि उनीहरूले उनको रगत लिन सकेनन् किनभने उनको मृत्यु भइसकेको थियो त्यसैले उनलाई आईसीयूमा राखियो र त्यसपछि हामीले थाहा पाए कि उनको आन्द्रामा आन्द्रा अड्किएको थियो। उहाँलाई शल्यक्रिया चाहिन्छ तर यो चाँडै नगरिएकोले उहाँ त्यहाँ बसिरहनुभएको आन्द्राबाट लगभग सबै आन्द्रामा सङ्क्रमित भएको खुलासा भयो किनभने मेरी आमालाई यो भएको थाहा थिएन तर सिग्नाले उहाँलाई अस्पतालबाट बाहिर निकाल्दा त्यसो गरिन्। त्यसपछि उनलाई लाइफ सपोर्टमा राखिएको थियो र 11 दिनभन्दा कम समयपछि म 55 वर्षको हुने7दिन अघि मैले मेरी आमालाई लाइफ सपोर्ट हटाउनको लागि साइन गर्नुपरेको थियो किनभने उनी हुँदा संक्रमण कत्तिको छिटो फैलिएको थियो भन्ने आशा थिएन। अस्पताल बाहिर। तपाईलाई मनपर्ने कुरा भन्नुहोस् तर यो हत्या हो जब पैसा वा सही बीमाले मेरी आमालाई जीवित राखेको हुन्थ्यो तर उहाँसँग CIGNA HMO भएकोले उनीहरूले तिर्न लायक नभएको निर्णय गरे। अझै 18 वर्ष पछि म अझै पनि आश्चर्यचकित छु कि अरू कति तिनीहरूको हातमा मरे।
जुन 21, 2009 मा 3: 10 PM
सिग्नाको चपेटामा परेका जो जोशुआ गोडफ्रेले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना गरेका छन्।